सिंहदरबार बैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकमा डा. प्रदीप केसीलाई पठाउने निर्णय | Nepali Health
सिंहदरबार बैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकमा डा. प्रदीप केसीलाई पठाउने निर्णय
डा. केसी भन्छन्, 'दरबन्दी नै नभएको ठाँउमा कसरी जाँउ ?'
२०७८ असोज १५ गते ९:३२ मा प्रकाशित
– डा. प्रदीप केसी
काठमाडौँ, १५ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. प्रदीप केसीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आयूर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा कार्यकारी निर्देशक रहेका एघारौँ तहका डा. केसीलाई गत बुधबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बैद्यखाना सरुवा गर्ने निर्णय भएको हो ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले एक महिना अघि दशौँ तहका आयुर्वेद चिकित्सक डा. शोभाराम सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशक रुपमा बैद्यखाना पठाएका थिए । दशौँ तहको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पठाउने राज्यमन्त्रीको सो निर्णय त्यसबेला सिंहदरबारबाट हटाइएका डा सबरी साहले सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
सर्बोच्चले राज्यमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश अनुसार गत बुधबार डा साहले मन्त्रालयबाट वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भन्ने पत्र पाएका थिए ।
सोही दिन नै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले डा. केसीलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा बैद्यखाना पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख शैलजा रेग्मीले गत बुधबारको राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा केसीलाई सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा पठाइएको बताइन ।
उनले सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समिति (गठन)आदेश २०७७ को दफा ९ (२) अनुसार डा केसीलाई सो जिम्मेवारीमा पठाइएको बताईन । दफा ९ ( २) मा मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई बैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्नेछ भनिएको छ ।
तर , डा केसीले दरबन्दी नै नभएको ठाँउमा आफूलाई पठाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले आफूलाई दरबन्दी नभएको ठाँउमा जान नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘त्यहाँको दरबन्दी तेरिज हेर्नुस्, निजामती कितावखानामा सोध्नुस्, एघारौँ तहको दरबन्दी नै छैन् । दरबन्दी नभएको ठाँउमा म कसरी जाँउ ? दरबन्दी भएको ठाँउ भए सरकारले खटाएको जुन सुकै ठाउँमा जानलाई कुनै आपत्ति छैन् । मैले मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई यसबारेमा भनिसकेको छु । उहाँहरुले आफ्नो निर्णयमा पुर्नबिचार गर्नुहोला,’ उनले भने ।
त्यसो त डा. केसीले नरदेवी चिकित्सालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सो संस्थाको ‘कायापलट’ बताइने गरेको छ ।
‘व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण धर्मराईरहेको एउटा ऐतिहासिक संस्था डा. केसी आईसकेपछि पुर्नजिवित भएको थियो,’ आयुर्वेद क्षेत्रका विज्ञहरु भन्छन, ‘दक्षता देखाईरहेको र राम्रो नतिजा दिईरहेको व्यक्तिलाई हठात रुपमा हटाउँदा त्यसको परिमाण राम्रो नहुन पनि सक्छ ।’
मन्त्रालयले भने नरदेवीमा डा केसीको स्थानमा अहिले कुनै पनि व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिएको बताएको छ ।
माओवादी केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुखमा कल्पना धमला
संसोधन भयो स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ र नवौँ तहको बढुवा सम्बन्धि एक साता अघिको सूचना
किर्ते कागजात बनाई १४ स्वास्थ्यकर्मी सरुवा गर्ने शाखा अधिकृत गजुरेललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्‍यो बर्खास्त
डीएम एमसीएचको एकीकृत प्रवेश परीक्षा कात्तिकमा, १७ कात्तिकसम्म फारम भर्ने म्याद
आयोगले सार्वजनिक गर्‍यो छात्रबृत्ति र विदेशी कोटातर्फ बाँकी रहेका सिटमा म्याचिङका लागि मनोनयन सूची
खरीद गरेको सात महिना पछि १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप भारतबाट आईपुग्यो
भेरी अस्पतालको मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टमा डा. वीरेन्द्रबहादुर चन्द नियुक्त
अस्पतालको शय्या बढ्यो, दरबन्दी बढेन
स्वास्थ्यकर्मीहरु बर्षमा कतिदिन काज सरुवा हुन पाउँछन् ?
बाग्मतीको स्वास्थ्य प्रमुखहरु परिवर्तन, काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरु फेरिए
स्वास्थ्य सेवाको १२ औँ तहमा बढुवा हुन २१ जनाको आवेदन (सूची सहित)